Huawei Honor Note 10 ရဲ့ Double Turbo စွမ်းဆောင်ချက် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ? | Myanmar Mobile App
Home Knowledge Huawei Honor Note 10 ရဲ့ Double Turbo စွမ်းဆောင်ချက် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ?
Huawei Honor Note 10 ရဲ့ Double Turbo စွမ်းဆောင်ချက် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ?
Huawei အနေနဲ့7လက်မ AMOLED display ၊ 5,000 mAh ဘက်ထရီစွမ်းအား Kirin 970 ပရိုဆက်ဆာ၊ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်တဲ့ Honor Note 10 စမတ်ဖုန်းကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Honor Note 10 မှာ 6.95-inch Full HD+ မျက်နှာပြင် (1080 x 2220 pixels) AMOLED display နဲ့ဖြစ်ပြီး Notch လုံးဝမပါဝင်လာပါဘူး။ ဒါ့အပြင် display ထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့ HDR10 စံနှုန်းနဲ့ 115% NTSC ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ Honor Note 10 ရဲ့ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ 24MP (f/1.8) အဓိကကင်မရာနဲ့အတူ 16MP (f/1.8) ဒုတိယကင်မရာငယ်ကို ပေါင်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ အရှေ့ဘက် Selfie ကင်မရာကတော့ 13MP f/2.0 aperture နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းမှာ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ GPU Turbo နည်းပညာနဲ့အတူ CPU Turbo လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Double Turbo mode ကြောင့်ဂိမ်းနဲ့ အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနေရာမှာ ပိုမိုသွက်လက်မြန်ဆန်စွာ လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ Double Turbo mode အတွက်လည်း ဖုန်းရဲ့ထိပ်ဘက်မှာ ခလုတ်ငယ်လေးတစ်ခုကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Honor Note 10 မှာ GPU Turbo နဲ့ CPU Turbo ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Double Turbo စနစ်ပါဝင်သည့် အတွက် Software နဲ့ Hardware Graphic နည်းပညာကို မြန်ဆန်စေပါလိမ့်မယ်။ EMUI Operating စနစ်ဟာ GPU နဲ့ CPU မှတဆင့် အခြေခံ အလုပ်လုပ်ပြီး Graphic Processing Frame Work ဟာ GPU graphic system ၆၀% ထိမြင့်တက်လာပြီး SOC system ၃၀% ထိ ကျဆင်းသွားသောအခါ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကြောင့် Mobile Legend၊ QQ၊ Flying Car၊ Escape From Fire Line Exciting၊ Battlefield၊ Army Attack၊ Wild Action ဂိမ်းတွေကို အကောင်းဆုံးဆော့ကစား နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Honor Note 10 မှာပါဝင်တဲ့ CPU Turbo က Game ကစားသူတွေ အတွက် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ CPU ရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းကတော့ 3D modeling နဲ့ AI အသိဉာဏ် Processing တို့ကို လုပ်ဆောင်ပြီး NPU မှာ Game ရဲ့ Framework ကို တည်ဆောက်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ Turbo Key ကြောင့် Background processing များကို ရှင်းလင်းစေပြီး CPU ကို Game ကစားနေချိန်တွေမှာ Limit ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ NINE Cooling System ကြောင့် CPU မှာ ပုံမှန် Frequency အပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဂရပ်ဖစ်အမြင့် Game များ ကစားနေချိန်များတွင်လည်း ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် အတွက် Lag ခြင်းမရှိဘဲ ချောမွေ့စွာ ကစားနိုင်မှာပါ။ အကြီးစား Game ၃ ခု ကစားနေချိန်တွင်ပင် Framerate ၅၉.၇၄ နဲ့ Lag ခြင်းမှာ ၀.၆၄ သာရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Huawei အနနေဲ့7လကျမ AMOLED display ၊ 5,000 mAh ဘကျထရီစှမျးအား Kirin 970 ပရိုဆကျဆာ၊ မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှပေါဝငျတဲ့ Honor Note 10 စမတျဖုနျးကို မိတျဆကျပေးလိုကျပါပွီ။ Honor Note 10 မှာ 6.95-inch Full HD+ မကျြနှာပွငျ (1080 x 2220 pixels) AMOLED display နဲ့ဖွဈပွီး Notch လုံးဝမပါဝငျလာပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ display ထောကျပံ့မှုအနနေဲ့ HDR10 စံနှုနျးနဲ့ 115% NTSC ကိုထညျ့ပေးထားပါတယျ။ Honor Note 10 ရဲ့ကငျမရာပိုငျးမှာတော့ 24MP (f/1.8) အဓိကကငျမရာနဲ့အတူ 16MP (f/1.8) ဒုတိယကငျမရာငယျကို ပေါငျးထညျ့ပေးထားပါတယျ။ အရှဘေ့ကျ Selfie ကငျမရာကတော့ 13MP f/2.0 aperture နဲ့ဖွဈပါတယျ။
ဒီဖုနျးမှာ ထူးခွားခကျြအနနေဲ့ GPU Turbo နညျးပညာနဲ့အတူ CPU Turbo လုပျဆောငျခကျြ အသဈကိုပါ ထညျ့သှငျးပေးလိုကျပါတယျ။ Double Turbo mode ကွောငျ့ဂိမျးနဲ့ အခွားလုပျငနျးဆောငျတာတှနေရောမှာ ပိုမိုသှကျလကျမွနျဆနျစှာ လုပျနိုငျလာပါလိမျ့မယျ။ Double Turbo mode အတှကျလညျး ဖုနျးရဲ့ထိပျဘကျမှာ ခလုတျငယျလေးတဈခုကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
Honor Note 10 မှာ GPU Turbo နဲ့ CPU Turbo ပေါငျးစပျထားတဲ့ Double Turbo စနဈပါဝငျသညျ့ အတှကျ Software နဲ့ Hardware Graphic နညျးပညာကို မွနျဆနျစပေါလိမျ့မယျ။ EMUI Operating စနဈဟာ GPU နဲ့ CPU မှတဆငျ့ အခွခေံ အလုပျလုပျပွီး Graphic Processing Frame Work ဟာ GPU graphic system ၆၀% ထိမွငျ့တကျလာပွီး SOC system ၃၀% ထိ ကဆြငျးသှားသောအခါ ပွနျလညျတညျဆောကျပွီး ဆောငျရှကျကွောငျးတှရေ့ပါတယျ။ ဒီနညျးပညာကွောငျ့ Mobile Legend၊ QQ၊ Flying Car၊ Escape From Fire Line Exciting၊ Battlefield၊ Army Attack၊ Wild Action ဂိမျးတှကေို အကောငျးဆုံးဆော့ကစား နိုငျပါလိမျ့မယျ။
Honor Note 10 မှာပါဝငျတဲ့ CPU Turbo က Game ကစားသူတှေ အတှကျ ပွုလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။ CPU ရဲ့ အဓိကလုပျငနျးကတော့ 3D modeling နဲ့ AI အသိဉာဏျ Processing တို့ကို လုပျဆောငျပွီး NPU မှာ Game ရဲ့ Framework ကို တညျဆောကျရနျ လုပျဆောငျပေးပါတယျ။ Turbo Key ကွောငျ့ Background processing မြားကို ရှငျးလငျးစပွေီး CPU ကို Game ကစားနခြေိနျတှမှော Limit ပွုလုပျထားနိုငျပါတယျ။ NINE Cooling System ကွောငျ့ CPU မှာ ပုံမှနျ Frequency အပွညျ့နဲ့ အလုပျလုပျစနေိုငျမှာဖွဈပွီး ဂရပျဖဈအမွငျ့ Game မြား ကစားနခြေိနျမြားတှငျလညျး ကောငျးမှနျစှာထိနျးသိမျးနိုငျသညျ့ အတှကျ Lag ခွငျးမရှိဘဲ ခြောမှစှေ့ာ ကစားနိုငျမှာပါ။ အကွီးစား Game ၃ ခု ကစားနခြေိနျတှငျပငျ Framerate ၅၉.၇၄ နဲ့ Lag ခွငျးမှာ ဝ.၆၄ သာရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ။
Previous articleဒေါ်လာ ၁၅၀၀ နဲ့ရောင်းချသွားမယ့် OPPO Find X Lamborghini Edition စမတ်ဖုန်း
Next articleဒေါ်လာ ၃၀ တန် Qin Feature ဖုန်းကို Xiaomi မိတ်ဆက်